HIM | Health in Myanmar » 2013 » June
MANA ဘာလုပ်နေလဲ - အပိုင်း (၆)
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, မူးယစ်ဆေး
ဖေါ်ပြပါ အချက် (၃) ချက်တွင် အဓိက အရေးကြီး အချက်အခြာ အကျဆုံးသည် စီမံခန့်ခွဲရေး စွမ်းရည်ကောင်းမွန်ခြင်း ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်အချက် (၂) ချက်ဖြစ်သည့် စံနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု ရှိခြင်းတို့ကို အလို အလျောက် ပေါ်ထွန်းလာစေနိုင်၍ ဖြစ်ပါသည်။
Mandatory drug detention centres
Torture is not rehabilitation. How many centres does Myanmar still have and how many detainees are in them? Jamie ++++++++++++++++++ UN Report Highlights Abuse as ‘Drug Treatment’ UN Expert Says Donors Should Stop Funding Drug Detention Centers March 3, 2013 (Geneva) –A United Nations report about torture and other abuses in healthcare settings points to […]
MANA ဘာလုပ်နေလဲ - အပိုင်း(၅)
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, မူးယစ်ဆေး, အကူအညီ
ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ အထိ အကျုံးဝင်သော နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးကိုလည်း နှစ် စဉ် ကျင်းပကာ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ တစ်နှစ်တာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တင်ပြပြီး အားသာချက်များကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အားနည်းချက် များကို စီစစ် လေ့လာ သုံးသပ်ပြီး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ကာ အကောင် အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပါသည်။
UNODC forgets harm reduction
It is remarkable that UNODC publishedadocument on UNODC and the promotion and protection of human rights but not mention harm reduction in it. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf Hunh? Jamie
မဲဆောက်မြို့ရှိ HIV ဝေဒနာရှင်များအား စောင့်ရှောက်သည့် SAW သို့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် သွားရောက်လေ့လာ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, Eleven, HIV, ကလေး, ဖြူဖြူသင်း
SAW အဖွဲ့၏ တာဝန်ခံ တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမျိုးလွင်က “ဒီနေ့ ဒေါ်အေးအေးမာနဲ့ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ တွေ့ ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က SAW ရဲ့ Activities တွေကို သူတို့ကို ရှင်းပြတယ်။ အဓိကကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ HIV ဝေဒနာ ရှင်တွေကို ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်လဲ။ ဆေးဝါးကို ဘယ်လိုရအောင် လုပ်လဲဆိုတာကို သူတို့ကို ပြောပြ တယ်။ သူတို့ကလည်း သူတို့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြတယ်။
Short article on governmental ART
Nothing about HIV test kit stockouts in this Eleven Myanmar article. Nothing about ‘moving’ patients from the nongovernmental to the governmental sector. How could the Ministry of Health determine which people living with HIV “who are suffering from six months or one year”? Jamie ++++++++++++++++++ Ministry of Health to expand access to HIV drugs Eleven […]
ART ဆေး သောက်ချိန် နောက်ကျသွားလို့ (အမေးအဖြေ)
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&Ano comments | Tags: ART, ကုသမှု, လမင်းကို, ဆေးဝါး
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ဆေးနဲ့ မတည့်ရင် ဖြစ်တာပါ။ ဆေးယဉ်ပါးတာက ဆေးကို တစ်ပတ်သောက်လိုက် ကြားထဲမှာ မသောက်ပဲနေလိုက်။ နောက် တစ်ပတ် ပြန်သောက်လိုက် ပြန်ဖြတ် ထားလိုက် လုပ်ရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေက အခု ပုံမှန် သောက်နေတဲ့ အတွက် ဆေးယဉ်ပါးမှု အတွက် စိတ်မပူပါနဲ့။ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးကတော့ ဆေးသောက်ပြီး နှစ် အတော်ကြာမှ သိရပါတယ်။ ဆေးနဲ့ မတည့်ရင်တော့ ၇က်ပိုင်း အတွင်း သိသာပါတယ်။
ကာလသား ရောဂါများလား၊ ကုရင် အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသလား (အမေးအဖြေ)
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&A4 comments | Tags: STD, ကုသမှု, လမင်းကို, ဆေးဝါး
လိင်အင်္ဂါကို ပါးစပ်နဲ့ ဆက်ဆံရင် ကာသလားရောဂါ ကူးပါတယ်။ ပါးစပ်မှာ နှုတ်ခမ်းမှာ လျှာမှာ သွားဖုံးမှာ ကူးနိုင်ပါတယ်။ ပိုးအပေါ်မူတည်ပြီး ကုသရတာ ကွဲပြားပါတယ်။ မကုသမီ သွေးစစ်ရပါတယ်။ သွေးအဖြေရမှ သက်ဆိုင်ရာရောဂါကို ကုသလို့ရပါတယ်။
How many men who have sex with men are on antiretroviral treatment? What proportion of people treated are men who have sex with men? Jamie ++++++++++++++++++ LGBT activists push for equality Cherry Thein Monday, 27 May 2013 Homosexuals face abuse and violations of their human rights, say activists, who are planning to launchacampaign […]
MANA ဘာလုပ်နေလဲ - အပိုင်း(၄)
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, SW, မူးယစ်ဆေး
လိုအပ်နေတဲ့ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ဆေးထိုးပြွန်များကိုလဲ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ၀ယ်ယူ သုံးစွဲခြင်း မပြုနိုင်တာကြောင့် ရှိတဲ့ ဆေး ထိုးအပ်နဲ့ ဆေးထိုးပြွန်ကို မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲသူ တစ်စုက မျှဝေသုံးစွဲ ကြရပါတယ်။ ဒီအခါ HIV ပိုး ရောဂါ ရှိသူထဲမှ ကျန်လူ များကို အလွယ်တကူ ကူးစက်မှု ရှိတော့ HIV ရောဂါ ပိုးဟာ မူးယစ်ဆေး ထိုးသွင်း သူကြားမှာ ပျံ့နှံ့ရာက တစ်ဆင့် ၄င်းတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ လိင်ဆက်ဆံ ဖက်များပါ ထပ်မံ ကူးစက်မှု ရှိလာမည် ဖြစ်ပါတယ်။
It's treatment time
It’s treatment time. The Global Fund documents are signed. New WHO ART guidelines will be out later in the week, there is talk ofamajor pharmaceutical company donation to Myanmar, the ART review team is shaping up, WHO is planning an External Review of the Health Sector Response to HIV maybe in September, and […]